Fandraisana andraikitra manoloana ny rivo-doza: tsy tokony hisalasala intsony ireo mpanabe | Région Boeny
Nidinana ifotony indray ny biraom-paritry ny fitantanana ny tandindon-doza na BRGC (Bureau régional de gestion des risques et catastrophes) sy ireo solontenan’ny Sampandraharam-paritry ny fanabeazam-pirenana eto Boeny hijery ny fomba fahazoana sy fampiharana ny fampiofanana natao ny 22 sy 23 okotobra lasa teo, mikasika ny fisorohana ny loza sy fiatrehana ny rivo-doza nomena ireo mpiandraiki-draharahan’ny Fanabeazam-pirenena eto Boeny.
Tsahivina fa ireo lehiben’ny Fari-pididiam-pampianarana sy sefo ZAP (zone d’administration pédagogique) ary ireo solontenan’ny talen-tsekolim-panjakana no nanaraka io fampiofanana voalaza tetsy ambony io.
Ireo tompon’andrikim-pampianarana ireo avy eo no nanao fampiharana fiatrehana ny loza, nanomboka ny 27 oktobra hatramin’ny 01 novambra 2014, niaraka tamin’ireo tompon’andraikitry ny BRGRC Boeny sy ny solontenan’ny Unicef, mpamatsy vola ny fiofanana, teny anivon’ireo distrika enina eto amin’ny faritra. Hoan’ny distrikan’Ambato Boeny sy Mahajanga II dia tao amin’ny kaominina Andranofasika no natao ny fampiharana, ho an’i Marovoay sy Mahajanga I dia tao Ankazomborona ary ho an’i Soalala sy Mitsinjo dia tao Matsakabanja.
Nisongadina ny fampahafantarana ny momba ireo loko telo (mavo, maitso, mena) ho fanairana sy fanambarana ny herin’ny rivo-doza mialoha sy mandritra ary aorian’ny fandalovany. Teo ihany koa ny fampiharana ny famonjena ireo traboina sy ny fampitam-baovao momba izany.
Manantena izahay hoy ny solontenan’ny Unicef, izay fa tsy hisalasala intsony amin’ny fandraisana andraikitra manoloana ny rivo-doza ny tompon’andraikitry ny fanabeazana rehetra ato anatin’ny Faritra Boeny raha izay fiofanana marobe natao mikasika ny fitantanana ny tandindon-doza sy ny loza voajanahary izay no jerena.